Imithombo yeendaba yeLifeStreet yenza iiBrand zithandwe
NgoLwesine, Meyi 31, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokwee-eyeballs kunye nokuqwalaselwa, akukho jelo elinye lokuhambisa elinokukhuphisana nalo imidlalo yezentlalo. Abantu kwihlabathi liphela bachitha malunga nemizuzu engama-200 yezigidi ngosuku bedlala Birds Angry. Umdlalo omtsha kaZynga, iCityville, utsaliwe Abasebenzisi abayizigidi ze-100 kwinyanga yokuqala iyodwa. Abathengisi banokuzama ukuhlwitha iqhekeza lepayi yokudlala ngokutyibilika kwimidlalo ethile eqhelekileyo eneempawu zabo, kodwa amathuba okuba loo midlalo iya kuhlala inombala xa ithelekiswa nabathengisi abathe bafumana ukwamkelwa ngokubanzi kunye nokuthandwa.
Yeyiphi indlela ebalaseleyo yokuba umthengisi athathe ithuba lokudlala? Intengiso ibisoloko ifumaneka kwii -apps zemidlalo, kodwa ukujolisa kwiintengiso ezifanelekileyo kunye nabasebenzisi abathatha inyathelo ngumceli mngeni. Le ibiyinjongo ye Indlela yobomi Iqonga lentengiso leRevjet… kwaye bafumana iziphumo.
I-LifeStreet ibonelela ngentengiso yangaphakathi nohlelo kugxilwe kuFacebook, Apple (iOS) kunye nokusetyenziswa kwe-Android. Iqonga lobuchwephesha le-LifeStreet's RevJet lakhiwe kwiserver yokuqala yento yehlabathi jikelele ukulungiselela ingeniso. Obu buchwephesha busebenzisa ukuphindaphinda uvavanyo oluphezulu lwesantya kwiintengiso, amaphepha okufika, izigqibo zokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni, ii-algorithms zokunyusa ingeniso okanye nayiphi na into enengeniso.
Iqonga lokulungiselela i-LifeStreet's RevJet lakhiwe kwiserver yento yokuqala kwindalo iphela kwaye iyimveliso ye- $ 25 + yezigidi zotyalo-mali lophuhliso lwesoftware. I-RevJet isebenzisa uvavanyo lwe-Iterative High Velocity kuvavanya nawuphi na umqhubi wengeniso yedijithali, ukusukela kwizinto ezibonakalayo ezinje ngeentengiso kunye namaphepha okufika kwizinto ezinengqiqo ezinje ngezigqibo zokurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kunye neendlela zokunyusa ingeniso. I-RevJet ivelisa amanqanaba okuphumelela okwenza imali kunye nexabiso eliphezulu ngokungaqhelekanga labathengi abatsha kubathengisi bezentlalo nabaselfowuni, abapapashi kunye nabaphuhlisi ngokufanayo. I-LifeStreet ifikelela kwizigidi ezingama-350 abasebenzisi bezentlalo kunye nabaselfowuni abasebenza rhoqo ngenyanga kwaye baqhube ngaphezulu kwesigidi se-200 sokufakwa kweapp. Inkampani yabizwa njengenye yeenkampani zabucala ezingama-500 ezikhula ngokukhawuleza eMelika yi-Inc Magazine kwaye izinze eSan Carlos, eCalifornia ineeofisi eMoscow, eOdessa naseRiga.
Ngofikelelo lwenyanga olungaphezulu kwezigidi ezingama-350 zabasebenzisi bezentlalo nabaselfowuni, i-LifeStreet ihambisa abathengi kubathengisi. Intsebenzo esezantsi yomngcipheko esekwe kumaxabiso apho umthengisi ahlawulela khona iziphumo kunokucofa kwaye unokhetho lokukhetha i-metric ekhethiweyo kwiNdleko ngokuFakela (i-CPI), indleko ngokufunyanwa kwexabiso (i-CPA), indleko ngePosti yokuGuqulwa kwePosti (CPX) njalo njalo (!), Abarhwebi bophawu abanako ukungahoyi iLifeStreet .. Elona xesha lokwenziwa kwengxelo elenziwa ngokwezifiso, abaphathi beakhawunti abazinikeleyo, kunye nezinye iinkonzo ezongezwe ngexabiso kukucwina kwikhekhe.
Kuba iLifeStreet ayiqhubeki nayiphi na imikhankaso yenkuthazo, ufumana kuphela abathengi abanexabiso eliphezulu, abanomdla wokwenene kwimveliso yakho. Khuphela ikhithi yemithombo yeendaba kwiLifestreet Media kwindawo yabo.
tags: Androidapileintengiso yomdlaloiPadiqonga lentengiso yeselfowuniintengiso yeselulaintengiso yesoftware
Meyi 31, 2012 kwi-2: 54 PM
Ngokwam, andikuthandi ukudlala imidlalo enezintengiso ezininzi kuba zilayishwa kancinci kunezinye iiapps ezinokuthi zingabinazintengiso zininzi. Iyavakala into yokuba ubandakanye intengiso kwiiNtaka ezinomsindo umzekelo kuba abantu abaninzi abavela kwiindawo ezahlukeneyo zobudala kunye nobudala baya kuyibona intengiso yomnye umdlalo okanye i-app entsha yeinjini yokukhangela; nangona kunjalo ayinakusebenzela wonke umntu. Ndiyazi ukuba ndicofe ngempazamo kubo kwaye ndacaphuka kuba indithumele kwenye indawo ngaphandle komdlalo. Ukuphosa kwincwadi yam.
Juni 1, 2012 ngo-10: 33 AM
Ndivumelana noMegan, nam andiyithandi imidlalo enentengiso kuba zilayisha kancinci. Andikuthandi ukuphazamiseka, ngakumbi xa ndiziva ndiqhuba kakuhle kwaye ndisemqolo kunye nomdlalo wam. Ndiyazibuza ukuba zisebenza kangakanani iintengiso.
Nangona kunjalo, yeyona ndawo iphambili yokuthengisa izindlu nomhlaba kwintengiso. Kunye nemidlalo ethile, unokufikelela kubaphulaphuli abaninzi okanye ujolise kubaphulaphuli abathile. Sibona intengiso kuyo yonke indawo ngoku, kwimidlalo, kwimpompo yegesi, kwiATM, njl.
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2014 ngo-8: 27 AM
Ewe olu luvo oluhle lokuthengisa, kodwa abantu abathanda ukudlala umdlalo ngoxinzelelo abanokungabi njalo. Kuba intengiso iyabaphazamisa ngelixa bedlala umdlalo wabo abawuthandayo. Ngelixa udlala imidlalo uninzi lwabantu luyithiyile intengiso.